Inona ny moto ratsy indrindra? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Bisikileta mahafinaritra indrindra - referansy feno
Bisikileta mahafinaritra indrindra - referansy feno
Inona ny moto ratsy indrindra?
Tongasoa eto amin'ny TTI Tongasoa eto amin'izao tontolo izao vaovao misy siansa mahafinaritra sy moto tsy mahazatra lava môtô lava indrindra ity anaconda mitady môtô India ity no môtô mitaingina lava indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny 2016 izay valo amby valopolo ka hatramin'ny telo metatra ny halavany ary efatra metatra lava noho ny teo aloha mpihazona, mpamorona ny Hudson Parmar, 30 taona, dia tokony mitaingina 100 metatra tsy ampiana mba hidirana amin'ny bisikileta ho bisikileta lava indrindra eran'izao tontolo izao ao amin'ny Guinness Book of World Records. Ny mitaingina an'ityonda ity dia tsy sombin-tsakafo angamba fa sarotra be ny mitaingina ity bisikileta ity noho ny halavany ary ny toetrany tsy milamina dia aza mitaingina azy eny an-dalana satria misy olana mandanjalanja. Môtô monstera sivy sivy alao sary an-tsaina izay hitranga amin'ny fifandonana eo amin'ny fiara sy môtô Malahelo ahy ny tompona fiara handeha hiatrika ity bisikileta adala noforonin'ilay mpilalao aostraliana Ray Baumann ity izay nitondra ity bisikiletan'ny bibilava ity hamaly faty kodiarana efatra.
Izy io dia noforonina ho bisikileta lehibe indrindra tamin'ny taona 1998, fotoana nanapahan'Andriamatoa Ray firaketana an'izao tontolo izao taorian'ny fivakiny ny taolany - ary nandany taona sy vola be dia be. Mandany 30 taonina ity biby goavam-be ity ary 9 metatra ny halavany ary 3 metatra ny haavony izay mety hanorotoro na inona na inona ao ambanin'ny kodiarany lehibe.
Izy io dia ampiasain'ny maotera 400 hp Detroit Diesel mandeha maotera ary scooter steampunk miisa valo litera. Raha tianao ny mozika, dia mazava ho azy fa ho tianao ity zavaboary mampivarahontsana namboarin'ny mpitia mozika Arthur Popple avy any amin'ny milina mozika orkestra Netherlands ity izay niaraka tamin'ny zavamaneno Nolavahana tamin'ny antsipiriany tena tsara, miaraka amina zavamaneno marobe am-perinasa nefa vitsy ihany milamina. Ny scooter dia manana gitara, barometre ary fanamafisam-peo, fizarana anjomara ary mpandahateny avo lenta, izay manambatra ireo fiasa rehetra ireo dia lasa fiara lavorary ho an'ny mpitendry mozika izay tsy maintsy manome kaonseran'ny mozika matetika dia tiako tokoa ity scooter ity. 7 Sky Rider 1 Tesky Rider 1 no prototype voalohany an'ny scooter elektrika novokarin'ny mpahay fizika alemanina Thomas Senko.
Ny mpamily iray dia misy motera roa Ny motera voalohany dia môtô mpamily kodiarana 8 HP ary ny motera faharoa dia môtô propeller 17 HP izay napetraka ao aorian'ny faran'ny Vehicle napetraka. Misy bateria polymer lithium-ion roa izay mamela ny fiara hisidina mandritra ny 30 minitra. Ny kilalao dia afaka mandeha hatramin'ny 75 kilaometatra eny an-dalana, fa amin'ny rivotra kosa dia afaka mahatratra ny hafainganam-pandeha 55 mph mandritra ny 30 minitra ity milanja scooter manidina adala 220 pounds fotsiny ity ary manana fehikibo ary parachute vonjy maika ho fiarovana ny mampiavaka indrindra ny ity paraglider ity dia ny ahafahanao manidina azy avy amin'ny faritra fisaka rehetra, mila ny hafainganam-pandehan'ny rivotra sy ny toetr'andro fotsiny ianao mba hanaovana ilay sidina sy ny fankafizanao ny ady amin'ny rivotra - ilay fiara mitovy amin'ilay sarimihetsika Men and Black The Monowheelis, izay novolavolain'ny mpankafy fiara. Kevin Scott, koa, ny Warfare dia nahatratra ny hafainganam-pandehan'ny 99 kilometatra isan'ora, na 61 kilometatra isan'ora, izany no nahatonga azy voatanisa ao amin'ny Guinness Book of Records tamin'ny 2015 mbola tsy nahita zavatra toa an'io hen'nko motoScott io milanja 220 eo ho eo pounds tsy misy mpitaingina, ary ny kodiarana dia 60 santimetatra ny savaivony.
Ny zavatra mampatahotra indrindra amin'ity fiara ity dia ny tsy fananany freins hanakanana ny fiara no tiako holazaina fa ny tongotrareo hampiato ity fiara ity. Manana motera 200cc ilay warhorse ary toa sarotra ny mitondra fiara satria tsy milamina be izy. Ny laharana 5 Nightshade Maiden's dia noforonin'ny Berend Hammers ary namboarin'ny tsingerin'ny konsep Marcel.
Orinasa manao moto tsy mahazatra izay mahery setra amin'ny bisikileta misy jiro miaraka amin'ny jiro Jaguar ary iray ihany ny maodelin'ity biby vy eto amin'izao tontolo izao, ilay bisikileta Jagua izay toa ny sary famantarana an'ny mpanamboatra fiara Britanika Jaguar ary mieritreritra aho fa tena azo antoka i Black Panther toy ity bisikileta ity. Ankoatr'izay, ity Iron Beast ity dia manana maotera 1.2 litatra V-kambana manome ny hafainganam-pandeha 120 mph tsy misy mipipy ankoatr'izay ity bisikileta nofinofy ity dia namboarina tamina rafitra fiara manokana izay afaka mamokatra ny kiakan'ny jaguar, ity seza ity koa dia namboarina avy tany am-boalohany ary toy ny an'ny isa chopper izay mamorona tryke kamio.
Raha manana fianakaviana lehibe ianao ary mbola maniry moto dia angamba noforonina ho anao manokana ity moto ity. Izy io dia manambatra ny antsipirian'ny môtô amin'ny volavolan'ny kamio misy fantsom-by mahery. Izy io dia manana motera matanjaka afaka mahazaka lanja mavesatra ao ambadiky ny taxi-be ary mazava ho azy fa ity mpitondra môtô ity dia afaka mitondra mpandeha mihoatra ny iray ary misy seza môtô King Skull môtô maro, izay tsy nahita lahateny orthopedika momba ny exoskeletons ao am-pianaranao. avy eo angamba ity ilay harley-davidson mahazatra ho anao FLH tcy voaravaka amin'ny antsipirihany vy vita amin'ny tanana dia tena fomba tsara hianarana anatomy inona no tianao holazaina taiza no nahitanao ity môtô ity voalohany izay hitako ilay teo alohany tamin'ny filmGhost mitaingina ilay ny ampahany tsara indrindra amin'ity bisikileta ity dia ny karan-doha volafotsy goavambe nihaona en izay namboarina teo an-damosin'ny môtô ary namoaka jiro mena hanahaka ny mason'ny matoatoa mampivadika ra, mahatsiravina, phew, matahotra aho ny laharana 2 amin'ny vavany izao fa eto mahita olona be fientanam-po ianao satria iray amin'ireo moto miaina mpamono afo eran'izao tontolo izao ao ambadiky ny mpamily misy loha dragona goavambe, izay sangan'asa kanto tsy manam-paharoa misy karazana manokana at dia ampifandraisina amin'ny fitoeran-tsolika mirehitra ary amin'ny fanindriana bokotra dia azonao atao ny manaitra ity sarin'afo ity ankoatra ny misy basy masinina roa eo ambonin'ireo fitoeran-tànana tena milay tokoa ny laharana voalohany amin'ny bisikileta vahiny Maro ny olona mino fa mendrika ny fiara sy moto taloha fanesorana na fanodinana.
Misaona ny mpaka sary any ah, mpanakanto monina any Bangkok izay manao sarivongana metaly manaitra rehetra miorina amin'ny biby goavam-be miaraka amina faritra nariana, moto sy bisikileta noforonina, bisikileta sci-fi vita tamin'ny vy vita amin'ny vy no toa vahiny avy amin'ny ny sarimihetsika Transformers, ary koa ny vahiny tigra amin'ny sarimihetsika Alien Covenant, soa ihany fa azo sakanana ity sombin-kazo mahavariana ity hahafahanao mankafy ny diany, mampifangaro vy vy ary ny fahalalana ara-javakanto dia mitarika ny bisikileta mankany amin'ny hybrid mahavariana sy tsy mahazatra eo anelanelan'ny mpihaza vahiny sy motera maotera maoderina misaotra noho ny fijerena hoe bisikileta inona no hitanao fa mahaliana indrindra ary maninona no ampahafantaro ahy amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany, raha vaovao ianao eto dia ataovy ho namanao aho amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny fahafaham-po amin'ny lahatsoratra TTI
Inona avy ireo bisikileta mahafinaritra indrindra?
Miaraka avaratry ny 300 hp, ny Kawasaki H2R nomoto badass indrindraeto amin'ny planeta. Ny maotera inline-efatra avo lenta dia mamonjy hafainganam-pandeha tsy misy famokarana hafaMotorcycle.02.11.2018
(tabataba mafy) - Ny bisikileta namboarina dia tokony ho iray amin'ireo faritra mahafinaritra indrindra amin'ny bisikileta. Azoko antoka fa maro amintsika no manonofy indray andro any hanana bisikileta izay namboarina sy namboarina ho antsika fotsiny. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, nieritreritra izahay fa hijery ny mpanamboatra bisikileta faran'izay tsara indrindra eran'izao tontolo izao. (mozika malefaka) Ny bisikileta Bastion dia tsy dia misy toa azy intsony noho ireo trondro titanium vita pirinty 3D namboarina sy namboarina, fantsom-pitrandrahana karibonetra naratra, natsangan'ny injenieran'ny Toyota teo aloha tao Melbourne rehefa nanambara i Toyota fa hijanona ny famokarana any Aostralia .
Nanapa-kevitra ny bisikileta fotsiny izy ireo fa ny lalana mandroso satria mampiasa titanium Ti-6Al-4V amin'ny vatony izy ireo. Izy io dia kalitao avo kokoa noho ny mahazatra amin'ny famokarana bisikileta satria tena sarotra ny miasa. Saingy noho ny fampiasan'izy ireo amin'ny laser mifantina, dia mampiasa laser izy ireo mba hamoronana vovoka titanium r ho ao anaty lugs, azon'izy ireo atao ny manararaotra ny fitambaran'ny fampihenana ny hovitrovitra sy ny fihenjanana entin'ny titanium miaraka aminy.
Ho any USA ho an'ny marika iray izay mampifangaro teknika nentin-drazana amin'ny endrika maoderina. Miresaka Cycle anglisy aho. Mpandresy amina loka marobe ao amin'ny American North Hand MadeBicycle Show.
Ny bisikileta anglisy dia natsangan'i Rob English, injeniera mekanika ary bisikileta avy any Great Britain. Nifindra tany Etazonia izy hiasa amin'ny sehatry ny bisikileta alohan'ny hanombohany ny bisikiletany tamin'ny 2009. Ny anglisy dia mpamily fitsapana fotoana nahomby ary nahavita ny fahafito tamin'ny fifaninanam-pirenena anglisy.
Raha ny marina, ny bisikiletany voalohany dia bisikileta fitsapana. Ny bisikileta mahia mahia Super Aero miaraka amina tsorakazo dia zavaboary anglisy tsy azo lavina. Fa anio kosa dia manamboatra ny zava-drehetra izy manomboka amin'ny bisikileta an-tendrombohitra ka hatramin'ny bisikileta trans-kaontinanta.
Na ny tandavana fitsapana fotoana sy bisikileta an-tendrombohitra 29 be loatra aza. Mpanamboatra bisikileta, mpanao hosodoko ary mpamorona sary. Tsia, tsia, tsy mankany amin'ny trano fisotroana izy ireo, manomboka ny tsingerin'ny Field.
Ny bisikileta an-tsaha dia asa tanan-tànana rehetra ao She ffield, zavatra iray izay tena reharehan'izy ireo. Sheffield dia fantatra amin'ny anarana hoe City City, trano nentim-paharazana amin'ny famokarana vy any Britain. Ka mety ihany raha amboarina any koa ny bisikileta.
Field dia manolotra ny bisikiletany amin'ny endrika roa, vita amin'ny fomba namboarina tanteraka na zavatra fantatra amin'ny hoe Field Works. Ny bisikileta Field Works dia tsy manana geometry manokana na asa fandokoana, fa midika izany fa afaka mahazo iray ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Ary miaraka amin'ny safidiny loko tsy voafetra, ny bisikileta Field Works hitanao dia mety mbola tsy manam-paharoa satria ny departemanta fandokoana ao an-trano Chromaworks dia mamorona endrika tsy mampino.
Mahagaga fa tsy mampiasa sticker na decals izy ireo, loko fotsiny no hitanao amin'ny bisikileta. Ny mpanamboatra fanao manaraka anay dia avy any Dublin, Irlandy ary raha ny marina dia izy irery no ao amin'ilay lisitra hanangana ny bisikiletany avy amin'ny fibre carbon. Mety efa nahita bisikileta Dimy amby dimampolo tao amin'ny fantsonay taloha, noho ny bisikileta volamena 24 karat izay namboarina sy namboarina ho an'ny mpiady UFC Connor McGregor.
John Cannings dia nanamarina izany tamin'ny Tour Down Under tamin'ny taon-dasa, raha tadidinao. Ankoatry ny fametrahana geometry manokana sy fibre karbaona hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fomban'ny mpitaingina bisikileta ny bisikileta tsirairay, ny iray amin'ireo zavatra manaitra indrindra momba ny Fifty One Bike dia ny tantara izay misy amin'ny bisikiletany rehetra ataon'izy ireo. Bisikileta iray izay mampihetsi-po ny fahazazan'ny mpanjifa any Bronx sy ny fotoanany tao amin'ny Corps Marin.
Hatramin'ny anaconda, bisikileta misy modely vita amin'ny bibilava sy taolan-tehezana mifehy izay manome henjana ho an'ny mpandeha fiarandalamby taloha sy mpitia mandady. Aidan ao amin'ny Fifty One Bikes dia mazava fa mandany fotoana hahafantarana ny mpanjifany rehetra, izay azo antoka fa ny tombony lehibe indrindra rehefa mividy môtô manokana. Farany fa tsy farany, mitodi-doha any Japon mba hijery Cherubim Bikes.
Nanao bisikileta izy ireo nanomboka tamin'ny 1965 ary izy ireo no mpanamboatra tranainy indrindra eto aminay. Ny marika naorin'i Hitoshi Konno dia nanana bisikileta novokarin'ny ekipa Olaimpika Japoney. Mpanamboatra bisikileta Kiron voamarina NJS izy ireo ary nahazo loka tamin'ny ankamaroan'ny seho varotra bisikileta vita tanana eran'izao tontolo izao.
Indrindra tamin'ny 2012 raha ny Cherubim Humming Bird no fampisehoana tsara indrindra tamin'ny American North BuiltBicycle Show. Na izany aza, inona no mahatonga ny bisikileta Cherubim ho mahafinaritra? dia ny fahafahan'izy ireo mampifangaro endrika am-pitsarana, toy ilay amin'ny mahia, vy, R2 eo akaikin'ny amin'ny Serina, na bisikileta mihazakazaka misy frein disc ary ny fahaizana mampiasa kodiarana 700c sy 650b.
Oh, ary mazava ho azy ataovy ny hummingbird sy ny zotram-piaramanidina ireto bisikileta ireto dia very saina. Ka any ianao no mandeha, dimy amin'ireo mpanamboatra bisikileta faran'izay mahafinaritra indrindra manerantany ary fantatro fa namela an-jatony maro isika. Betsaka, maro ny mpanamboatra bisikileta mahazatra manerana an'izao tontolo izao, koa mba ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany raha misy sosokevitra rehetra.
Ary ankehitriny raha te hahita lahatsoratra hafa ianao, dia jereo ny fitsidihan'i John ny Corsa Corsa.
Fa maninona ny maitso no loko ratsy ho an'ny bisikileta?
MaitsoNy bisikileta diaRatsyVintana
Nandritra ny fotoana lava, nandinika ireo mpitainginamaintsomahatsiravinaloko ho an'ny moto. Raha mitaingina amaintsobisikileta, inoana, mety ho nianjera ianao ary maty. Avy eo, taorian'ny ady, maro tamin'ireo bisikileta ireo ihany no nalefa nody ary namidy ho ambiny.
Misy akanjo marobe eto amin'izao tontolo izao amin'ny bisikileta, saingy azonao atao ve ny manome anarana azy rehetra? Fantatrao ve fa pataloha jeans Amalia Rosa anao manokana aho? Amin'ity lahatsoratra ity dia hitety anao aho amin'ny sasany amin'ireo akanjo malaza indrindra amin'ny tontolon'ny bisikileta, inona no soloin'izy ireo ary aiza? Izy ireo dia nanomboka tamin'ny nanombohana anay niaraka tamin'ny akanjo lava bisikileta malaza indrindra na dia ireo tsy mpitaingina bisikileta aza dia hahafantatra fa ny mpitarika ny Tour de France dia hanao ilay akanjo mavomavo. Akanjo ity izay nofinofisin'ireo mpitaingina bisikileta matihanina sy natokany ho an'ny Tour de France Leading Jersey ary toy ny mahazatra, ny ankamaroan'ny hazakazaka lehibe dia azo, toy ireo sokajy jersey maro hafa. Izany dia tamin'ny 1919, raha ny Tour deFrance, taorian'ny fiatoana naharitra efa-taona, dia nankalaza ny fiverenan'ny roa ampahatelony tamin'ny vanim-potoana 5560 kilometatra sy ny dingana 325 kilometatra, nanapa-kevitra ny talen'ny hazakazaka Onritu Fitsarana fa ny mpitarika ny hazakazaka tsy maintsy niavaka tamin'ny mpifaninana hafa ary talohan'ny nanombohan'izy roa ireo dingana tamin'ny 18 Jolay 1919, i Christophe avy any France dia nanao ny akanjo mavomavo voalohany, fa tamin'izany fotoana izany dia fomba iray fotsiny hanamarihana ara-batana ilay hazakazaka talen-tsekoly, saingy ity fotoana ity dia nivadika ho iray amin'ireo akanjo lava bisikileta nalaza indrindra, saingy ny antony nisafidianana ny loko mavo satria loko mpanohana ny gazety hitazonana ireo andro ireo fa tsy ny akanjo ihany no ananaran'ireo ekipa mavo ireo aroloha bisikileta mavo sy kojakoja bisikileta rehefa miakanjo akanjo mavo ny iray amin'ny mpitaingina azy, ilay zazalahy Jersey Insight no hamantarana azy manaraka ary raha ny fahitako azy ny tena milay dia ilay akanjo lava polkadot, fantatra koa amin'ny hoe King of the Mountains Jersey isaky ny fiakarana manan-danja rehetra amin'ny ny fizahan-tany dia misy teboka ao an-tampon'ny tampony, fa arakaraky ny mihasarotra ny fiakarana no ahazoana isa bebe kokoa izay ahazoana isa betsaka indrindra amin'ny fiandohan'ny andro amin'ny maraim-be dia efa nanomboka ny 1933 ny fanamiana tototry ny fanoritana an-tendrombohitra fa mbola tsy nisy jersey hatramin'ny 1975 ny akanjo fotsy dia nomena polkadots mena fa maninona ny teboka polka no tsy misy ifandraisany amin'i van teenswell intsony dia noho ny iray amin'ireo mpanohana schokoladenpool ary hosaronany teboka polka ny bara sôkôla ary avy eo dia tonga ilay jersey polka dot ity maitso kely ity Ny isa dia ilay akanjo maintso fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Mein Over tamin'ny Tour deFrance tamin'ny 1952, ny gadona copie haingana kokoa nandresen'i margin lehibe toy izany dia nijanona avokoa ka nahatonga ny fandrisihana fanampiny ny mpikarakara nampiditra ny jersey maintso sy ny jersey sprint toa ny polkadot -Ny mpitaingin-tsoavaly Jersey dia nanangona pirinty teny amin'ilay zotra, fa tsy tany an-tendrombohitra tamin'ity indray mitoraka ity nandritra ny sprinter antonony, fa teo kosa dia nahazo isa ny valiny tamin'ny famaranana, ka nanapa-kevitra ny mpikarakara mankalazà ny tsingerintaona faha-50 tamin'ny 1953 niaraka tamin'ny akanjo lava sy loko miloko maitso, azo inoana fa iray amin'ireo mpanohana ara-dalàna ilay fitsidihana antsoina hoe Sardinia The White Jersey, fantatra ihany koa amin'ny hoe MayaBlanc, no tena akanjo mavomavo, fa ho an'ireo tanora mpitaingina azy dia ity no akanjo lava ho an'ny laharana voalohany ambanin'ny 25 santimetatra ny fanasokajiana ankapobeny Tamin'ny taona 1975 no nampiasana voalohany ny akanjo, fa ho an'ireo mpitaingina fiara ihany tao anatin'izay telo taona voalohany tamin'ny hazakaza-piarakodia Professional, avy eo ny taona 1983 dia novana ho mpamily voalohany ihany no afaka. , ary tamin'ny taona 1985 dia natokana ho an'ny mpamily latsaky ny 25 ny fanamiana fanamiana nanomboka tamin'ny 1989 ka hatramin'ny 1999, saingy tamin'ny taona 2000 dia niverina izy io ary efa nisy hatrizay ny ekipa mpitarika ny Giro themaglia rosa Izany dia mitovy amin'ny akanjo mavomavo mavo any ambony, fa mavokely izy ary ny loko mavokely dia avy amin'ny gazety fanatanjahan-tena italianina izay manao ny hazakazaka taratasy mavokely dia novatsiana vola ary natao pirinty mifanohitra amin'ny akanjo rehetra amin'ny jubilation dia mbola nitovy ihany ny akanjo mavokely. e no nahazoana azy voalohany tao amin'ny Giro ny jersey volomparasy dia ny jersey sprinter indray mitovy amin'ny jersey maitso ao amin'ny Tour de France saingy volomparasy izy tamin'ny 1967 nampidirina ny jersey sprint, jersey mena io tamin'izany fotoana izany ary tamin'ny 1969 ny mpikarakara dia nanapa-kevitra ny handoko ny volomparasy volomparasy ary volomparasy hatramin'ny taona 2010 raha nanapa-kevitra ny mpikarakara ny hanova azy ho jirony mena saingy tamin'ny 2017 dia niova izy ireo Na izany aza, tao anaty lavajesse iray indray ilay akanjo lava manga, fantatra koa amin'ny anarana hoe Lea Asura, no akanjo tsara fiakarana tsara indrindra, izay mitovy nefa tsy mitovy amin'ny an'ny PolkaDot Jersey an'ny Tour de France Ity no lobaka an-tendrombohitra ho an'ny Giro 1974, ny jersey no voalohany nomena loka ary tamin'izany dia maitso hatramin'ny 2012 raha ny mpanohana ny ny fanasokajiana Jersey Bangkamedal Alaun, banky italiana, dia nanavao ny mpanohana ary nanjary manga indray dia tsy toy izany foana, rehefa nanomboka ny hazakazaka tamin'ny 1931 dia volomboasary ary avy eo nivadika fotsy nandritra ny herintaona tamin'ny 1941, ary avy eo izaho navadika ho ora nge tamin'ny 1955, avy eo nivadika mavo mitovy loko toy ny Tour de France izy ary nijanona mavo foana hatramin'ny taona 1999 ankoatra ny tamin'ny 1977 rehefa nivadika volomboasary izy, ny jersey mena dia noraisina tamin'ny 2010, ny jirika avana jersey manokana mampino eo amin'ny tontolon'ny bisikileta ary ny iray izay mpandeha bisikileta matihanina maro no manonofinofy hahazo jersey izay homena ilay mpitaingina izay mandresy amin'ny hazakazaka tompon-daka eran-tany amin'ny taranja bisikileta marobe tsy mitovy amin'ireo akanjo itondra mandritra ny hazakazaka, ny avana ny akanjo lava dia tonta mandavantaona ary mandra-pahatongan'ny tompon-daka manaraka sy ireo mpandresy amin'ny hazakazaka dia afaka misafidy ny hanao tadin-trandrika amin'ny akanjon'izy ireo na eo amin'ny vozon'akanjo na amin'ny akanjo lava mavomavo teraka miaraka amin'ny fandrarana UCI hatrany ambany ka hatrany, fa ny loko mavo maitso mainty mena manga manga ireo loko ireo dia miseho amin'ny peratra olympika ihany koa ny mistery maro manodidina ny fiandohan'ny akanjo avana, fa ny loko tany am-boalohany dia nataon'ny mpanorina ny mo olimpika vement Baron Pierre de Coubertin namboarina Okay tsy jersey ity, ity dia ampahany tena manan-danja amin'ny Tour de France ity izao ary loka tsy ofisialy omena ny mpitaingina farany.
Amin'ny ankapobeny, ny anarana dia avy amin'ny lanterne mena izay nahantona tao ambadiky ny kalesy izay tadiavin'ilay mpiasan'ny fiarandalamby raha toa ka misaraka ny lamasinina hafa. Antenainay fa nankafizinao ity fihaonan'ny sasany amin'ny akanjo malaza indrindra amin'ny tontolon'ny bisikileta ity, fa inona ny akanjo itiavanao azy? Maninona ianao no tsy mandeha amin'ny app gcn ary milaza hoe inona no akanjo manaingo bisikileta tsara indrindra ary maninona ary avy eo no nipoitra ny teboka polka hmm hmm tamin'ny taona 1975 no nampiasaina voalohany ny jersey fa ho an'ireo mpitaingina ihany tao anatin'ny telo taona voalohany hazakazaka matihanina, avy eo 1973, 1983
Mahafinaritra ve ny bisikileta?
Na ny tsy mpitaingina fiara aza tsy maintsy miaiky fa tsara ny sary aseho amin'ny motomangatsiatsiaka. Ny endrik'ilay moto, ny endriny, ny heriny ary ny feony dia tsara tarehy daholomangatsiatsiaka, ka tsy mahagaga raha mitafy anao ho tsara tarehy ny mitaingina motomangatsiatsiakakoa! Na izany aza, misy antony hafa maro mitaingina abisikiletafa tsy nymangatsiatsiakaantony.
Inona no loko ratsy vintana amin'ny moto?
nyratsy vintanana izany aza nifikitra tamin'i Harleys. Olona iray no naheno an'io maintso ioMotorcycleafaka mifangaro mora foana amin'ny tontolo ary sarotra ny mahita azy. Raha ny hita, nyColormaitso dia nifandrayratsy vintanaary ny fahantrana nandritra ny taonjato maro, niverina tany aloha tanyMOTOSIKLETAary fiara.29. 2014.
Inona no dikan'ny FTW ho an'ny bisikileta?
Eny, misy heviny maro ho an'ny endrika fohyFTW. Na izany aza, ao amin'nybisikiletaslang no tena dikan'ny hoe. 1. Kodiarana roa mandrakizay.
Ny bisikileta fanatanjahan-tena dia tsara toy ny bisikileta tena izy?
1 Fiatraikany.Bisikileta mijanonadia tsara ho an'ny fanatanjahan-tena, raha mbola mifantoka amin'ny tongotrao fotsiny. Ny teboka manontolo abisikileta mijanonadia ny fanaovana azy io ho fampihetseham-batana mafy sy mafy ho an'ny feny sy vodinao.Bisikileta tena izyna izany aza, ampidiro ao anaty mitaingina ny faritra rehetra amin'ny vatanao.
Mitovy amin'ny fihodinana ve ny bisikileta?
kofehy:kofehymampiasa nyihanyhozatra toy ny arabemitaingina bisikileta.Bisikileta:Bisikiletamampiasa ny hozatry ny vatana ambany rehetra - ny glute, hamstrings, quad, shins ary zanak'omby. Ny feny, indrindra, miasa mafy tokoa.9 2008.
Nahoana ny bisikileta no manondro rantsan-tànana roa?
Ilay mpitaingina fiara dia nanaiky ny fiezahana hitondra soa aman-tsara ataon'ny mpamily raha nyMotorcyclenandalo. nyrOA-rantsan-ny fiarahabana dia mariky ny fihavanana. Toy izany no ataontsikamôtôonja hiteny hoe misaotra anao nanome toerana hahafahanay mizara zana-dalana.
Inona no dikan'ny hoe 13 amin'ny bisikileta?
telo ambin'ny folo'13'- patch iraisan'ny' Outlaw 'mahazatrabisikileta. Mety misy dikany maromaro. Ny mahazatra indrindra tazoninahevitradia ilayfaha-13litera abidia 'M' ary midika hoe Marijuana na Meth. Fantatra ihany koa ny mijoro amin'ny toko voalohany na 'Reny' an'ny M / C.07.12.2018
Iza amin'ny bisikileta mahafinaritra indrindra eto an-tany?
Raha mangataka mpikambana iray amin'ny vahoaka ianao hanintona bisikileta 'cool' aminao dia mety ho tonga amin'ny sary madiodio Triumph Bonneville ianao. Raha nisy môtô mihitsy izay mametaka ny hevitry ny cool dia ny bisikileta ikambana avy any Hinckley.
bisikileta kodiarana matavy
Iza no bisikileta maotera tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao?
Ny bisikileta dia vita tamin'ny 1978 fa nampidirina an-tsena tamin'ny 1980. Ny masinina dia tsy masinina haingana kokoa na tsara hikirakira azy, fa nahatonga ny herin'ny bokotra faran'izay tsara, azo itokisana ary sambo mpisitrika anaty rano lalina. Noheverina ho ny bisikileta maotera tsara indrindra tamin'izany fotoana izany. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia, namboarina ny bisikileta tsara indrindra sy tsara indrindra.
Iza no bisikileta maloto indrindra eto an-tany?
Ankehitriny dia hiresaka momba ireo bisikileta maloto folo tsara indrindra sy malaza indrindra eto an-tany isika. Ny bisikileta dia vita tamin'ny 1978 fa nampidirina an-tsena tamin'ny 1980. Ny masinina dia tsy masinina haingana kokoa na tsara hikirakira azy, fa nahatonga ny herin'ny bokotra faran'izay tsara, azo itokisana ary sambo mpisitrika anaty rano lalina.